🥇 ▷ Sony Xperia XZ4 ilaaliyaha hore ayaa u muuqda inuu ku xaqiijin lahaa shaashadaada muuqaal 21: 9 ah ✅
Sony Xperia XZ4 ilaaliyaha hore ayaa u muuqda inuu ku xaqiijin lahaa shaashadaada muuqaal 21: 9 ah
Waxay umuuqataa in sanadka 2019 isbeddelada muhiimka ah ay ku imaan doonaan taleefannada casriga ah ee Jabbaan-ka ee Sony, isbedelo aan dhamaanteen sugaynay in la dabaqo.
Bilowgii Diseembar qaar ayaa soo muuqday gudbiya taasi waxay u muuqatay inay na tustay hore ee Sony Xperia XZ4 ee soo socota. Iyaga waxaan ku aragnay jaantusyo cabirkoodu aad u yaryahay waxa uu Yaabiyaanku maanta bixiyaan, marka lagu daro ka mahadcelinta shaashad ka sarreysa tan caadiga ah.
Laakiin maanta waxaa jiray sawirro dhab ah oo ina tusinaya difaaca hore ee aaladda, oo la rumeysan yahay inuu ka tirsan yahay Sony Xperia XZ4 sababtoo ah muuqaalka weyn ee ay leeyihiin. gudbiya la sifeeyay bilowga bisha.
Haddii ilaaliyayaashani run yihiin, waxaan xaqiijin karnaa waxa shaashadaadu u ekaan doonto taas oo gaari doonta qaabka 21: 9, kan ugu sarreeya ee lagu arkay taleefanka casriga. Hoos u dhigista xujooyinka kooxda ayaa sidoo kale la xaqiijiyay, wax badan oo ay sugayeen.
Ilaaliyaha hore waxaan ku arki karnaa dusha sare ee godadka uu madaxa madaxa ka geli doono, dareemayaasha, kaamirada hore iyo dalool yar oo ay ku badan tahay qalabka ogeysiinta LED-ka. Laakiin intaas oo keliya ma aha akhristaha qaaliga ah, maxaa yeelay sawirro ayaa sidoo kale u muuqday kuwa na tusinaya gadaasha kooxda.
Halkaas waxaan ku arki karnaa kiiska ku habboon qalabkan. Laakiin waxaan sidoo kale u mahadnaqeynaa saddex kaamirooyin gadaal ah, labalal Flash flash, halka dhinaca aan aragno boosas loogu talagalay furayaasha mugga, akhristaha faraha, furaha korantada iyo furaha loogu talagalay kaameerada. Dhinaca hoose waxaan ku aragnaa hadalka, USB Type-C iskuxirka iyo makarafoonka weyn.
Waqtigan xaadirka ah waa dhammaan macluumaadka gacanta ku haya taleefankan casriga ah ee Sony ay diyaarineyso. Waxaa la rumeysan yahay in la soo bandhigi karo inta lagu gudajiro Shirka Caalamiga ah ee loo yaqaan ‘Mobile World Congress’ oo si caadi ah loogu qaban doono Barcelona dhamaadka bisha Febraayo.
Macluumaadka ka socda GSMArena